Waa sidee Mustaqbalka xidiga argentina iyo Man city Sergio Aguero Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Waa sidee Mustaqbalka xidiga argentina iyo Man city Sergio Aguero
Waa sidee Mustaqbalka xidiga argentina iyo Man city Sergio Aguero
Sergio Aguero ayaa qirtay inuusan hubin inuu noqon doono ciyaaryahan Manchester City wixii ka dambeeya dhamaadka xilli ciyaareedka, iyo inuu eegi doono inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa marka uu ku soo laabto taam ahaanshihiisa.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina ayaa soo afjaray olole jahwareer ah 2020/21, iyadoo dhaawacyada iyo arrimaha la xiriira COVID-19 ay ku xaddidayaan kaliya shan kulan oo Premier League ah ayuu xiyaaray xagaagan.
In kasta uu ahaa hogaamiyaha ugu waxqabadka fiicnaa 10 kii sano ee lasoo dhaafay ayaa hadana waxaa cinwaanka City qaateen xidigaha Sida Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Ferran Torres iyo Ilkay Gundogan oo dhamaan ah xidigo isbedel Sameeyen tan iyo inta uu dhaawac ahaan uga maqanyahy Sergio Aguero.
Hadalka ku saabsan mustaqbalka Aguero ee garoonka Etihad wuxuu bilaabay inuu sii xoogeysto bilihii la soo dhaafay, iyadoo kooxda La Liga ee Barcelona lagu soo waramayo inay doonayso inay sugto adeegyada 32 jirka ah haddii uu noqdo mid xora ah xagaaga dambe.
Haatan, Aguero wuxuu qirtay inuusan ogeyn inuu sii dheereyn doono joogitaankiisa Premier League, iyo in dantiisa koowaad ay tahay inuu ku laabto kubbadda cagta.
Ma aqaan waxa dhici doona ayuu yidhi Aguero sida laga soo xigtay The Times Waxa ugu horeeya ee aan doonayo inaan sameeyo waa inaan ciyaaro kubada cagta. Mar alla markii aan bilaabo ciyaarta, ka dib waan arki doonaa go’aanka ay tahay inaan qaato.
Ma aqaan halka aan aadayo dhamaadka sanadka. Wax fikrad ah kama haysto. Waan sii wadan doonaa ciyaarta ilaa jirkeygu ii oggolaado. Waxaan rajeynayaa inaan sii socon karo dhowr sano oo dheeri ah.
Aguero wax yar buu ka qabtay inuu yareeyo wararka la isla dhexmarayo ee ah inuu ku sii jeedo Camp Nou xagaagan, ka dib markii uu hore u qirtay inuu jeclaan lahaa inuu xiriir la yeesho saaxiibkiisa caalamiga ah ee Lionel Messi.
Mustaqbalka xidiga kooxda Barcelona lionel Messi ayaa sidoo kale aheen mid cad, iyadoo Paris Saint-Germain iyo City ay ku dagaallamayaan inay la soo wareegaan messi Haddii hadalada Aguero lagu sameeyay rajada laga qabo in City ay sii xoojiso xiisahooda ayaan wali cadeyn – sida mustaqbalkiisa Premier League.
Previous articleManchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Xidiga David Alaba
Next articleThomas Tuchel oo k hadlay xalaada xidigaha Pulisic iyo Geriud.